यहाँ नेपालीहरुलाई लिम्पियाधुराको चिन्ता बढीरहेको छ ! तर, के वर्षा राउत बलिउडको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७७, ११ जेष्ठ आईतवार ११:१६
सरकारले गत बुधबार दिउँसो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्याे । सरकारले सार्वजनिक गरेकाे उक्त नयाँ नक्सालाई सबै नेपालीले स्वागत गर्याे, सरकारकाे तारिफ गर्याे, सरकारलाई धन्यवाद दिए । भारतमा कर्म थलाे बनाएकी मनिषा कोइरालाले पनि नेपालकाे नयाँ नक्साकाे समर्थन गरिन् । उनले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गर्नुभएकाे एक ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै नेपालकाे नयाँ नक्साकाे समर्थन गरेकी थिइन् । अभिनेत्री काेइरालाले मन्त्री ज्ञवालीकाे ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै लेखेकी थिइन्, ‘हाम्राे सानाे राष्ट्रकाे गरिमालाई बनाइराख्नु भएकाेमा धन्यवाद । हामी सबै तीन महान राष्ट्रबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक वार्ताकाे आसा गर्छाैँ ।’ उक्त रिट्वीटपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू मनीषाविरुद्ध खनिए । एबीपीले त ‘भारतकाे खाएर चीनकाे गीत गाउने’ भन्दै आराेपसम्म लगायाे । केही भारतीय सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ताले मनीषालाई बहिष्कार गर्नुपर्ने भन्दै ह्यासट्याग समेत चलाए ।
मनिषाको बचाउमा नेपाली कलाकारले खुलेरै समर्थ गरिरहेका छन् । कतिपय सेलिब्रेटीले मनिषाको पक्षमा आफ्नो आवाज राख्दै भारतीय संचार माध्यम र सामाजिक प्रयोगकर्ताले उनीसँग माफी समेत माग्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । सीमा विवादबारे बाेल्दा वलिउडकी अभिनेत्रि मनिषाले नेपालमा वाही वाही भइरहेकी बेला यता नेपालीकी अभिनेत्री वर्षा राउत भने ओलोचित बन्न पुगेकी छन् । अहिले वर्षालाई नेपाली भूमीको भन्दा पनि आफ्नो भारतीय साथीहरुको बढी चिन्ता भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले आक्रोश पोखिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकाे भिडियाेमा वर्षाले भारतीय साथीहरुसँग आफूले ‘फेस’ गर्न गाह्राे भएकाे बताएकी छन् । उनले नेपाली र भारतीय पत्रकार मिलेर झगडा गराइरहेकाे गम्भीर आरोप समेत लगाएकी छन् ।
सार्वजनिक भिडियाेमा उनले भनेकी छन्- ‘देशको माया लाग्छ भन्दैमा ए होइन, यो त हाम्रै हो, तिमीहरुले किन यस्तो गरेको भनेर झगडा गर्ने होइन नि, यो त भारत सरकार र नेपाल सरकार मिलेर पो कुरा गर्ने हो त । यहाँ भारतीय र नेपाली पत्रकार मिलेर झगडा गराइरहेका छन् । मेरो भारतीय साथीहरुसँग म कसरी फेस गर्ने अनि भारतीय साथीहरुले मसँग कसरी फेस गर्ने भइरहेकाे अवस्था छ ।’ वर्षकाे उक्त अभिव्यक्तिले उनी अहिले आलोचित बन्न पुगेकी हुन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा वर्षा र मनिषाबीच तुलनासमेत भइरहेकाे पाइन्छ । शिवराज पाेखरेले ट्वीटरमा लेख्छन्- मनिषा काेइराला, अनुपम खेर जस्काे फ्यान नेपालमा भन्दा भारतमा बढी छन्, तर पनि उहाँहरूले फ्यानकाे मतलब नगरी नेपाललाई सपाेर्ट गर्नुभयाे, वर्षा राउतलाई भारतीयसँग फेस गर्न गाह्राे भयाे रे, कति वटा फिल्मकाे अफर आएकाे थियाे कुन्नी ? अहिले धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ता अभेनेत्री वर्षामाथि खनिएका छन् । कसैले वर्षालाई ‘जलप’वाला कलाकार भएकाे समेत भनेका छन् । कसैले त ‘लिपुलेक दे, वर्षा राउत लैजा’ भन्न समेत भ्याएका छन् ।
आज चर्चित हाँस्य कलाकार अर्जुन घिमिरे (पाँडे) को जन्मदिन, शुभकामना दिनेको ओइरो
‘यदी योजनाले काम गरेन भने योजना बदल्नुहोस् तर लक्ष्य होइन ।’ – प्रदिप खड्का
लोकप्रिय नायिका ‘नन्दिता केसी’को आज जन्मदिन, शुभकामना दिनेको ओइरो
सुन्दरी नायिका ‘सारा सिर्पाली’को आज जन्मदिन, शुभकामना दिनेको ओइरो
आज नायिका ‘उपासना सिंह ठकुरी’ को जन्मदिन, शुभकामना दिनेको ओइरो
PREVIOUS Previous post: भारतमा कोरोनाबाट ३ हजार ८६८ को मृत्‍यु, संक्रमित हुनेको संख्या १ लाख ३१ हजार ४२३ पुग्यो
NEXT Next post: अग्रमोर्चामा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमण देखिन थालेपछि सुरक्षा निकायले थप सतर्कता